“आकार पोष्ट” अब मोबाइल मा पनि
Aakar June 06, 2010
“आकार पोष्ट” को लागि नयाँ मोबाइल भर्सन बनाइएको छ । mofuse को सहायता मा आकारपोष्ट को मोबाइल भर्सन बनाइएको हो ।
अब मोबाइल मा पनि सजिलैसँग आकारपोष्ट पढ्न सकिने भएको छ । मुख्य ब्लग मोबाइल मा हेर्न गाह्रो हुने तथा लोड हुन पनि धेरै समय लागेको कुरालाई मध्यनजर राख्दै, हाम्रो ध्यान मोबाइल भर्सन ब्लग तिर तानिएको हो । अब आकारपोष्ट का ब्लग शीर्षकहरु मोबाइल मा देखिनेछन् । जसलाई, क्लिक गरेपछि पुरै पोष्ट सकिने छ । मोबाइल मा सबैकुरा पढ्न सकिने भएपनि, कमेन्ट गर्न भने सकिँदैन । हुन त गुगल ले पनि, मोबाइल को लागि ब्लग फर्म्याट गरिदिने गरेको छ , तर गुगल भन्दा mofuse को सर्भिस केही हदसम्म राम्रो पाइयो ।
“आकारपोष्ट” मोबाइल भर्सन http://m.aakarpost.com मा हेर्न सकिने छ । मोबाइल भर्सन को निर्माण कार्य अझै जारी रहेकोले, हाललाई यो लिंक रिडाइरेक्ट गरिएको छ । साथै, “आकार टेक्नोलोजी ब्लग” को मोबाइल भर्सन पनि निर्माण गरिएको छ । आकार टेक्नोलोजी ब्लग http://mtech.aakarpost.com मा हेर्न सकिनेछ ।
हामीलाई आशा छ, मोबाइल भर्सन यहाँहरु ले मन पराउनुहुनेछ । मोबाइल भर्सन को लागि अझै केही काम बाँकि नै छ, यहाँहरु को सहयोग को अपेक्षा रहनेछ ।
मोबाइल मा आकारपोष्ट र टेक्नोलोजी ब्लग एकपटक ट्रा्इ गरेर हेर्नुहोस् ।
आकारपोष्ट : m.aakarpost.com
आकार टेक ब्लग : mtech.aakarpost.com
Abhishek June 6, 2010 at 5:06 PM
Good News aakar!!
डि आर न्यौपाने "सूर्य" June 6, 2010 at 9:55 PM
बधाई!! आकार जी
Basanta June 7, 2010 at 7:35 AM
बधाई आकार भाइ!
ब्लगलाई मोबाईलमा पनि हेर्न सकिन बनाउने कुरा विचार गर्दै थिएँ म पनि। भाइबाट यो विषयको प्राविधिक पक्षलाई समेटेको पोष्टपनि आउनेछ भन्ने आशामा छु।
सन्दिप निरौला [Sandip Niroula] June 7, 2010 at 7:37 AM
बधाई छ । mobile बाट गर्न पनि comment सकियोस् ।
bhim Prasad June 7, 2010 at 1:02 PM
यो फड्कोका लागि बधाइ
Anonymous June 7, 2010 at 6:04 PM
आकार जी यो फड्कोको लागि हार्दिक शुभकामना छ । हिन्दी भाषा सर्पोट नगर्ने मोबाइलमा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन तपाईको ब्लग !
दूर्जेय चेतना June 7, 2010 at 10:33 PM
बास्तबमै आकारजीको यो नया फड्को नै हो। यस सम्बन्धी प्राबिधिक जानकारी पनि चाडैनै आउने छ भन्ने आशा गरेको छु।
Rajesh Ghimire June 9, 2010 at 6:21 PM
wow its great please write about how to do this
Aakar June 9, 2010 at 8:20 PM
कलमबीर_घोताने June 10, 2010 at 7:31 AM
आकारजी यसको लागि के देवानागरी font हुनुपर्छ कि कसो? मेरोमा मोबाइलमा ब्लग त खुल्यो तर पढ्न मिलेन :(
सूर्य/सिकारु November 12, 2010 at 4:04 AM